Ogeeyyiin fayyaa waa’ee Coronavirus maal jedhu? Caqasaa, wal dhageessisaa, waan dhageettanis hojii irra oolchaa. Advice about #corinavirus from Oromo medical experts in Afaan Oromoo | OromianEconomist
Ogeeyyiin fayyaa waa’ee Coronavirus maal jedhu? Caqasaa, wal dhageessisaa, waan dhageettanis hojii irra oolchaa. Advice about #corinavirus from Oromo medical experts in Afaan Oromoo	March 25, 2020
Ogeeyyiin fayyaa waa’ee Coronavirus maal jedhu? Caqasaa, wal dhageessisaa, waan dhageettanis hojii irra oolchaa